सक्षम काङ्ग्रेस बनाउन लागी पर्नेछु ः खड्का
सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको १३औं महाधिवेशन सन्निकट छ । आगामी भाद्र १७ गते नगर वडा र गाउ“ कार्य समितिको अधिवेशन हुदैछ । क्षेत्रीय अधिवेशन २२ गते र २५ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने उक्त पार्टीको योजना रहेको छ । महाधिवेशन नजिकि“दै गर्दा जिल्लामा पनि अधिवेशनको चटारो बढ्दै छ । जिल्ला अधिवेशनका लागि नेताहरु आआफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गाउ“ दौडाहामा व्यस्त हुन थालेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका कोषाध्यक्ष तथा नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष डम्बर खड्का जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने बताउ“छन् । युवा पुस्तामा पार्टीमा पकड जमाउन सफल खड्कास“ग सन्दकपुर दैनिकले गरेको कुराकानीः
प्रश्न ः तपाई आसन्न पार्टीको अधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन लाग्नु भएको भन्ने हल्ला छ । वास्तविकता के हो ?
खड्का ः आसन्न १३औँ महाधिवेशनमा इलाम जिल्ला भरका नेकाका युवा नेता कार्यकर्ता साथै निस्वार्थ भावना भएका हाम्रा अग्रजहरुको भावनाअनुसार उहाँहरुले नै यसपाली तपाइँले उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने प्रत्येक गाविस घुम्ने क्रममा गर्नुभएको आग्रह अनुसार मैले जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको हँु ।
प्रश्न ः पार्टी सभापति पदमा यो भन्दा अगाडि पनि प्रतिष्पर्धा गरेका र हाल वहालमा रहेका साथीहरु पनि प्रतिष्पर्धी छन् । उनीहरुसँग भिड्न तपाइँको योजना के छ ?
खड्का ः योभन्दा पहिला सभापति भैसकेका हाम्रा आदारणीय अग्रजहरु हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्दा उहाँहरुले गरेका पुराना कार्यहरुले नेपाली काँग्रेस इलाम जिल्लामा राम्रो सँगले अगाडि बढ्न नसकेको, भातृ संस्थाहरु चलायमान नभएको, गुटबन्दीले चरम सिमा नाघेको, पार्टीले पटकपटक स्थानीय र संसदीय चुनावमा हार व्यहोर्नु परेको, पार्टीको आफ्नो भवन नभएको, युवाहरुको भावना समेट्न नसकेका,े शिक्षक संघ जस्तो बौद्धिक संस्थालाई संवोधन गर्न नसकेको लगायत विभिन्न कारणले गर्दा १३औँ महाधिवेशन पश्चात युवाहरुको भावना समेट्नुका साथै भातृ संस्थाहरुलाई चलायमान गराउन नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै भवन निर्माण गर्न हरेक गाउँमा पार्टी प्रशिक्षण गराउन, पार्टीका साथीहरुको संरक्षण गर्न र आसन्न निर्वाचनमा युवाहरुको साथै साथीभाइको मनोबल उच्च राख्न र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलेकै स्थानमा पु¥याउन साथै दक्ष र सक्षम काङ्ग्रेस बनाउन मेरो उम्मेदवारी रहने छ ।
प्रश्न ः नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा तरुणहरुको भूमिका धेरै हुन्छ । युवाहरु समेट्ने कार्यमा तपाइँको कस्तो भुमिका रहन्छ ?
खड्का ः मुलत के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका युवाहरुलाई पार्टीका अग्रणी नेताहरुले समेट्न नसक्नुका कारण उमेरको अन्तर, पचास उकालो लागेका हाम्रा सभापतिहरु हुन्छन् । युवाहरु १५ देखि ४० सम्मका हुन्छन् । र अहिलेका पुस्ताले चाहेका कुराहरु र भावनाका कुराहरु पुराना पुस्ताले बुझ्न सक्दैनन् । संवोधन गर्न सक्दैनन् र चिनजान समेत भएको हँुदैन । साथै हाम्रा भइसकेका र उठ्दै गरेका सभापतिहरु कतिपय गाविसमा पाइला समेत टेक्न सकेका छैनन् भन्ने गुनासा युवाहरुले उठाएका छन् । त्यो मबाट हुँदैन । म युवा पनि भएको र तीनवटै क्षेत्रका प्रत्येक वडामा सङ्गठन बिस्तारका क्रममा पुगेको हुनाले युवाको भावना, चाहनाअनुरुप उनीहरुको साथमा रहेर हातेमालो गर्दै सङ्गठनको काम गर्नेछु । र युवाहरु समेट्ने छु ।
प्रश्न ः जबजब चुनाव या अधिवेशन आउँछ अनि मात्र गाउमा कार्यकर्ता गुहार्दै जाने नेताहरुको परम्परा देखिन्छ । तपाइँ बीचबीचमा गाउँमा पुगेको हँुदा कार्यकर्ताले कस्तो नेतृत्व छान्न चाहेको पाउनु भएको छ ?
खड्का ः कार्यकर्ताले त्यहाँका अभिभावकहरुले वास्तवमा आफ्नो दुःख सुखमा साथ दिने, केही काम परेको बेला सहयोग जुटाइदिने र निरन्तर अथवा एकाध महिनामा गाउँ पुगेर हाल खबर बुझिदिने, विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग पु¥याइदिने साथै आश्वासन दिएर काम नगर्ने भन्दा काम गर्ने मान्छेको चाहना राखेका छन् ।
प्रश्न ः नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहदेखि गाउँसम्म लबीको होड छ । भागवण्डाको कुरा छ । तपाइँ कुनै पक्षमा हो की स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धी ?
खड्का ः म पहिलो कुरा त ६०।४० भागबण्डाको र गुटबन्दीको राजनीति, संस्थापन र तान्त्रिक हुनुहँुदैन भन्ने पक्षधर हुँ । पार्टीलाई त्यहि कुराले इलाममा पनि धेरै कमजोर बनाएको छ । पार्टीमा यस्तो थिति बस्नु राम्रो हँुदैन । पार्टीभित्र मूल्याङ्कनको राजनीति हुनुपर्ने जसले राम्रो काम गरेको छ उसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म कसको भन्दा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस हौँ र पार्टीलाई दरो बनाउने हो । मेरो भुमिका पनि पार्टीलाई प्रतिपक्षिहरुसँग लड्न सक्ने र विजयी बनाउने हो र सक्षम काङ्ग्रेस बनाउनका लागि मैले पार्टीमा रहेर कस्तो भुमिका निर्वाह गर्दा हुन्छ म त्यहि गर्नेछु । भागवण्डा र गुटबन्दिलाई हटाएर सबल काङ्ग्रेस बनाउनका निमित्त मेरो भूमिका रहनेछ । सोहि अनुरुप काम गर्नेछु । स्वतन्त्र रहि यस्तो कार्य गराउने छु र म नेपाली काङ्ग्रेसको १३औँ अधिवेशनको उम्मेद्वार हो ।
प्रश्न ः अहिलेसम्म पार्टीमा कुन कुन पदमा रहेर कस्ता कस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो ? जसले गर्दा तपाई सभापतिको दावेदार हुनुहुन्छ ?
खड्का ः मेरो राजनीति शुरुवात भनेको २०४१ सालमा आदर्श माविमा नेविसंघ अध्यक्ष भएपछि शुरु भएको हो । २०५१ सालमा नेवि संघको जिल्ला सभापति भएँ । म सभापति भएको कार्यकालमा २७ वर्षसम्म लगातार हारेको इलाम क्याम्पसको स्ववियु चुनाव दुई पटकसम्म विजयी गराएँ । मानेभञ्ज्याङका पर्शु तामाङ, नयाँबजारका सीटी शेर्पा, बलबहादुर खड्का, नामसालिङका भिम प्रधान र म पार्टीको पटक पटकको झडपमा नयाँबजार नामसालिङ सोयाङ, प्याङ लगायतका गाविसमा काङ्ग्रेसका समर्थक प्रति चुनावै पिच्छे हुने ज्यादतीमा अहोरात्र खटेर कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने काम गरेको छु । २०६३ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भई राष्ट्रको विद्यार्थीहरुको नेतृत्व गर्दै फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, हङ्कङ, थाइल्याण्ड लगायतका देशको प्रशिक्षण तथा वल्र्ड युथ फेस्टीवलमा भाग लिएको थिएँ । द्वन्द्वकालमा शान्तिवार्ताको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेँ । नेपाली काङ्ग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट इलामको जिल्ला कोषाध्यक्ष भएपछि गएको निर्वाचनमा पटकपटक काङ्ग्रेसले उठाएको उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो तर्फबाट विजयी गराउन भरपुर सहयोग गरेँ । एक हजार आठ सय ५० जना अन्य पार्टीका साथीहरुलाई पार्टीमा प्रवेश गराएँ । २०४६ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दा जेल परेँ । २०६३ को आन्दोलमा युवाहरुको तर्फबाट जिल्लाकै नेतृत्व गर्दै प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेको थिएँ । हाल सम्म पनि निरन्तर पार्टीको काम गरिरहेको र जनताको काम गरेको भएपनि कोषाध्यक्ष पदबाट सवै साथीहरुलाई सहयोग पु¥याउन कठिन भएको हँुदा अबको दिनमा राम्रो काम गर्न र अझ बढि सहयोग पु¥याउन मेरो सभापति पदमा दावेदारी हो ।
प्रश्न ः नेपाली काँग्रेस पुँजीपतिको पार्टी भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाइँ तल्लो स्तरबाट उठेको भन्ने सुनिन्छ । तपाइँ सभापति हुनुभयो भने गाउँ तहमा आस्थावान कार्यकर्ता र जिल्लाबासीको मद्दत कसरी गर्नुहुन्छ ?
खड्का ः म गरिब परिवारमा हुर्किएको मान्छे हु । मैले १७ वर्षसम्म भोक रोग र गरिबीसँग संघर्ष गर्दै आएको हुँ । मलाई गरिब के हो भन्ने राम्रैसँग थाहा छ । गाउँ कुना र कन्दरामा बसिरहेका हाम्रा पार्टीका साथीहरुका लागि, युवाका लागि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक परिवर्तन समावेशीकरण र आत्मसम्मानका लागि अबको दिनमा म काम गर्नेछु ।